Mmetụta nke ụkọ mmiri na Spain na ihe ọ rụpụtara | Network Meteorology
Mmetụta nke ụkọ mmiri ozuzo na Spain
Oké unwu bu ihe okike nke mejuputara ngbacha mmiri ozuzo di ala karie ala (nke gha adi nma na mpaghara) ya mere, mbelata nke ihe eji enweta mmiri, ma mmiri ma nke aquifers. Spain chere ihu, na-agwụ 2017, nke oke ọkọchị n’afọ iri abụọ gara aga.
Kedu ihe Spain ga-eme iji kwụsị ọnọdụ a?
1 Mmiri kacha njọ
2 Kwa afọ akọrọ
3 Ihe na-akpata ụkọ mmiri ozuzo ahụ
Mmiri kacha njọ
Enweghi oke mmiri ozuzo na-ebelata ogo nke ọdọ mmiri ndị dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ ọwụwa anyanwụ yana kwa n'ụzọ dị egwu ndị nọ na northwest. Ọkwa dị gburugburu 30%, ụkpụrụ ndị a na-ahụbeghị kemgbe 1990.
Mmiri a na-amachi, na-agụta nke nke ikpeazụ mmiri ozuzo, ọ bụ 20 isi n'okpuru nkezi nke ikpeazụ 10 afọ. Ihu igwe nke Spain anọwo na-akpọ nkụ mgbe niile, yana ụkọ mmiri ozuzo nke ihe karịrị 3-4 afọ. Agbanyeghị, unwu a kachasị njọ n'ime afọ 20.
Ọnọdụ enweghị mmiri a dị oke mmiri na ite bekee Miño-Sil, Segura, Júcar, Guadalquivir na ọkachasị na Duero, na ọ fọrọ nke nta 30% erughị 10 afọ gara aga.
N'iburu na obodo Spen na mbara ala, ụkọ mmiri ozuzo juru ebe niile. N'ihi nke a, 75% nke ókèala Spanish nwere ike ịkpa oke. N'ime oge 1991-1995 enwere ụkọ mmiri nke yiri nke a na ụkpụrụ dị ala dị ala.
Unwu a mere site na ụkọ mmiri ozuzo na 2014 na 2016, nke mere ka mmiri zoo 6% n'okpuru nkezi. Tụkwasị na nke ahụ, isi iyi na-enwe obere mmiri ozuzo na netwọk na-enye ndị bi na-efunahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 25% mmiri.
Na ihe ndị a niile, anyị ga-agbakwunye mmụba nke njem na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara Spanish, ha abawanye ebe a na-akọ ugbo maka ịgba na, n'ihi mmụba nke okpomọkụ dị ala, otú ahụ ka ọnụego evaporation nke mmiri.
Kwa afọ akọrọ
Nke a hydrological afọ kwubiri na October nke afọ a bụ nnọọ akọrọ ke ofụri ofụri. Mpaghara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke Spain dịka Galicia, ugwu ugwu Castilla y León, nnukwu akụkụ nke Asturias na Cantabria enwewokwa mbelata oke mmiri ozuzo.
O doro anya na ebe kachasi ike n'afọ n'afọ bụ Extremadura, Andalusia na Canaries. Mmiri ozuzo na obodo ndia gafere 75% nke uru nkịtị, na-eme ka ọ bụrụ afọ nke asatọ mmiri ozuzo pere mpe kemgbe 1981.
Kemgbe afọ ọmụmụ mmiri ọhụrụ a malitere (2017-2018), ọnọdụ ahụ ka njọ. Na nkezi data nke lita 150 kwa square mita nke anakọtara site na Ọktọba ruo Nọvemba, ọ bụ naanị 63 ka a chịkọtara.Ọ pụtara, 58% pere mpe karịa nkịtị.
Ihe na-akpata ụkọ mmiri ozuzo ahụ
N'ọtụtụ ọdọ mmiri dị na Spain, obodo nta dị iche iche apụtala n'okpuru mmiri n'ihi ọkwa mmiri dị ala. Obodo ndị a mmiri mikpuru ha kemgbe afọ 60, n'oge a na-ekepụta ọtụtụ ebe mmiri Spen. Offọdụ n’ime obodo ndị a na ihe ncheta bụ ụka ochie nke Santa Eugenia de Cenera de Zalima na ọdọ mmiri nke Aguilar de Campoo (Palencia) na obodo ochie nke Mansilla dị na La Rioja.
Otu nsogbu nke unwu na-akpata otutu mmadu bu nsogbu nke inweta. Mbelata mmiri dị mkpa iji chekwaa mmiri mmiri ruo ogologo oge o kwere mee. Gọọmentị na-ahụ na ọ na-arụ ọrụ kachasị iji zere mgbochi mmiri. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọnọdụ a gaa n'ihu, ụfọdụ ndị mmadụ ga-enwe nsogbu gbasara mmiri.
Dịka ị pụrụ ịhụ, iji mmiri eme ihe n'ụzọ gara nke ọma bụ otu isi ntọala dị mkpa nke mba na-enwe ụkọ mmiri. Na-efu 25% na netwọk ọkọnọ ọ bụ ihe efu niile anyị na-agaghị ekwe. Iji zere ọnọdụ a, a ghaghị ịkụziri ndị bi ebe ahụ iji mee ihe dị oke ọnụ ahịa a dị oke ọnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ọkọchị » Mmetụta nke ụkọ mmiri ozuzo na Spain
Vidio ahụ ga-eme ka a mata banyere mmetụta nke mgbanwe ihu igwe
Ugboro abụọ nke mgbanwe ihu igwe